Shiinaha 1000W 1500W 2000W Mashiinka alxanka gacanta ee Laser-ka ah ee warshadeeyayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha |Ammaan
Alxanka leysarka waa isticmaalka tamarta sareeysa ee laysarka si maxalli ahaan loogu kululeeyo walxaha meel yar oo si taxadar leh loo dhamaystiro isbeddelka walxaha.Tamarta shucaaca layserku wuxuu ku faafaa walxaha iyada oo loo marayo kuleylku si xawli ah, walxahana waa la dhalaalin si ay u sameeyaan barkad dhalaalaysa oo gaar ah.
Mashiinka alxanka laser GWLS
Alxanka leysarka waa isticmaalka tamarta sareeysa ee laysarka si maxalli ahaan loogu kululeeyo walxaha meel yar oo si taxadar leh loo dhamaystiro isbeddelka walxaha.Tamarta shucaaca layserku wuxuu ku faafaa walxaha iyada oo loo marayo kuleylku si xawli ah, walxahana waa la dhalaalin si ay u sameeyaan barkad dhalaalaysa oo gaar ah.Waa nooc cusub oo alxanka ah, oo lagu dabaqay alxanka qaybo sax ah iyo walxo dhuuban, alxanka barta, alxanka dabada, alxanka dabada, iwm. aag, iyo qallafsanaan yar.Xawaaraha alxanka waa dhakhso, tolidda alxanka waa siman, qurux badan oo qurux badan.
Xawaaraha quudinta fiilada: 0-80mm/min
Dhererka quudinta siliga: 5 mitir
Dhexroor quudinta fiilada: 0.8mm, 1.0mm 1.2mm 1.6mm
Dhexroorka ugu badan ee gariirada siliga: 200mm
Qaabka aaladda GWLS-1000W GWLS-1500W GWLS-2000W
Awoodda ugu badan ee laysarka 1000W 1500W 2000W
Nooca leysarka Fiber laser
Dhererka hirarka leysarka 1070nm± 5nm
Hagaajin inta jeer 5000HZ
Galitaanka ugu badan ee alxanka laysarka 2.5mm (kaarboon)
Dhexroor xudunta fiber 50-100um
Dhererka fiber-ka 5m (la beddeli karo)
Awoodda ugu badan ee mashiinka oo dhan 4.7KW 6.8KW 9KW
Faa'iidooyinka alxanka laysarka
1.Miisaan fudud, cabbir yar, naqshad ergonomic, xajin raaxo leh, hawlgal ku habboon iyo xasillooni wanaagsan.
2.Qalabku waxa uu ku qalabaysan yahay gacan giraangireed oo ka ilaalinaya qalabka isku dhaca una fududaynaya riixida iyo jiidida.Oo waxaa jira tilmaame xaalad shaqo, kaas oo muuqaal ahaan muujin kara heerka qalabka.
3.Nidaamka alxanka wuxuu taageeraa habka kaydinta maktabadda, iyo hababka qiiqa nuurka badan waa la hagaajin karaa.
4.Nidaamku waxa uu la socdaa xaalada shaqaynta wakhti ka waqti,waxa uu la socdaa oo uu ururiyaa heerka hawleed ee laysarka, qaboojiyaha,iyo guddiga xakamaynta.Qufulka badbaadada ayaa taabta oo soo daaya iftiin si loo hubiyo isticmaalka badbaadada leh.
5.Meelaynta saxda ah ee iftiinka cas ayaa ku habboon in la eego, hawlgalkuna waa mid fudud, alxanka waxaa lagu samayn karaa gacanta.
6.Iyada oo siligga siligga ah ee caqliga leh, shaashadda kantaroolku waxay si toos ah u dejinaysaa cabbirrada fiilooyinka quudiyaha, hawlgalkuna waa mid fudud.
7.Taageerada gaarsiinta (0.8, 1.0, 1.2, 1.6) birta aan la taaban karin, birta kaarboon, silig alxanka aluminium si ay ula kulmaan xaalado kala duwan oo kala duwan.
8.Qaab-dhismeed si buuxda u xidhan oo leh biyo iyo kanaalada hawada ku dhex dhisan.
9.Golaha xakamaynta wuxuu qaataa nidaam madax-banaan oo kuleyl ah si loo hagaajiyo xasiloonida hawlgalka guud ee qalabka.
10.Tolmada alxanka ayaa ah mid qurux badan, degdeg ah, wax calaamado alxan ah ma leh, ma jiro midab, iyo baahi looma baahna in hadhow la dhalaaleeyo.
Waa maxay faraqa u dhexeeya alxanka laysarka iyo alxanka argon?
Mabaadi'da farsamo ee kala duwan
1.Alxanka leysarka: shucaaca layserku waxa uu kululeeyaa dusha si loo farsameeyo, kulaylka oogadana waxa uu u fidiyaa gudaha iyada oo la adeegsanayo kulaylka.Iyada oo la xakameynayo cabbirrada laysarka sida ballaca, tamarta, awoodda ugu sarreysa iyo soo noqnoqoshada garaaca laysarka, qaybta shaqada waa la dhalaashay si ay u samayso barkad dhalaalaysa oo gaar ah.
2.Alxanka Argon: Iyada oo ku saleysan mabda'a alxanka qaansada caadiga ah, walxaha alxanka birta waxaa lagu ilaaliyaa gaaska argon, walxaha alxanka waxaa lagu dhalaaliya qaab dareere ah substrate alxanka iyada oo loo marayo hadda sare si loo sameeyo barkad dhalaalaysa, sidaa darteed biraha alxanka leh iyo tignoolajiyada alxanka kaas oo walaxda alxanku ku gaadho isku xidhka birta.Sababtoo ah sahayda joogtada ah ee gaaska argon inta lagu jiro alxanka fiyuuska heerkulka sare, walxaha alxanka lama xiriiri karo oksijiinta hawada, taas oo ka hortagaysa oksaydhka walxaha alxanka.
Laba, meelo kala duwan oo codsi ah
1.alxanka Laser: Tiknoolajiyada alxanka leysarka ayaa si weyn loogu isticmaalay soo saarista baabuurta shisheeye;alxanka laysarka ayaa si weyn loogu isticmaalay warshadaha elektiroonigga ah, gaar ahaan warshadaha microelectronics.
2.Alxanka Argon Argon: Alxanka Argon wuxuu ku habboon yahay alxanka biraha aan birta ahayn iyo birta daawaha ah ee ay fududahay in la oksidhiye (inta badan alxanka Al, Mg, Ti iyo alxankooda iyo birta aan birta lahayn);ku habboon alxanka hal dhinac ah iyo samaynta laba-geesoodka ah, sida alxanka hoose ee alxanka leh tuubooyinka;alxanka argon tungsten arc sidoo kale wuxuu ku haboon yahay alxanka saxan khafiif ah.
Hore: All Cover Exchange Platform biraha CNC Laser Goynta Machine
Xiga: 20W 30W 50W 70W 100W CNC Laser Calaamadaynta Mashiinka Birta
Mashiinka alxanka Fiber Laser-ga Gacanta
Qiimaha Makiinada alxanka Fiber Laser-ga Gacanta
Mashiinka alxanka gacanta ee Laser
Qalabka alxanka leysarka ee gacanta lagu hayo
Kaarboon Fiber Laser Cutter, Gooyaha Laser-ka ee xaashida, Laser Cnc Machine Iibka, Alxanka Tooska ah ee Laser, Mashiinka Cnc Laser, Alxanka dahabka,